Qaxooti Archives - Page 2 of 3 - Sawirrotv
June 07, 2016 – Madaxda Dowladd Keny ayaa shaaca ka qaaday in aanay xoog u adeegsan doonin dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxootiga ee ku yaala Degmada Dhadhaab ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya. Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya Joseph Nkaissery ayaa shalay oo Isniin ahayd kaamka Dhadhaab ka sheegay isaga oo ay isla …
June 06, 2016 – Madaxweynaha dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminaayo ayaa goordhow soo gaaray garoon diyaaradeed oo ku yaalla banaanka Xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi Bari Kenya. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay wasiirka amniga gudaha ee dalka Kenya, xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Kenya, safiirka Soomaaliya ee Keya Jamaal Axmed …
Madaxweynaha oo Maanta u Safraya Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya
June 05, 2016 – Madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in uu maanta safar gaaban ugu amba-baxo Magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Ujeedka Safarka Madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa ku qotoma arimo ku aadan sidii Dowladda Kenya uu kala hadli lahaa Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya. Kenya waxa ay …
Hay’adda UNHCR oo Sheegtay in 700 oo Tahriibeyaal ah Lagu La’yahay Badda (VIDEO)
May 29, 2016 – Dad kor udhaafaya 700 oo Tahriibayaal ah ayaa laga walwal qabaa inay ku geeriyoodeen badda u dhaxaysa Afrika iyo Yurub, sida laga soo xigtay hay’adda UNHCR Afhayeenka hay’adda UNHCR Carlotta Sami oo arrintan faahfaahisay ayaa sheegtay in qiyaastii 100 qof la laayahay kuwaas oo saarnaa doon degtay arbacadii. Ciidamada badda ee …
Doon ay Qaxooti ka Buuxeen oo Muuqaal Live ah laga Duubay Markii ay Degaysay (VIDEO)
May 26, 2016 – Ciidamada Badbaadina badda ee dalka Talyaaniga ayaa badda ka soo guray Boqolaal Tahriibayaal ah oo si life ah ay ula gadoontay doo ay saarnaayeen kuwaasi oo kusii jeeday qaaradda Yurub. Doontan ay saarnaayeen dadka Tahriibayaasha ah ayaa dhinac u dhacday (qalibantay) kadib markii dadkii saarnaa doontaasi ay arkeen Markab doonayay in …
Qaxootigii Shalay laga Bad-baadiyay Badda u Dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga (VIDEO)
May 25, 2016 – Hay’adda IOM (International Organization for Migration) ayaa warbixin ay shalay soo saartay ku sheegtay in weli dad tahriibayaal ah ay ku dhimanayaan badda u dhaxaysa qaaradda Africa iyo Yurub. Hadalka Hay’adda ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo shalay Badda Mediterranean-ka laga soo badbaadiyay Ku dhawaad 2,500 oo Muhaajiriin ah, sidaasina …
May 03, 2016 – Ciidamada booliska ee Somaliland ayaa waxay gacanta ku dhigeen rag gaaraya ilaa 22 nin oo loo haysto inay yihiin kuwa dadka ka tahriibin jirey Somaliland, waxaana lagu wadaa in goor dhow Maxkamad la soo taago. Waraysi uu bibiyay Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland, General C/laahi Fadal Iimaan ayaa waxaa uu sheegay in ay …
Gabar Soomaali Ah Oo Isku Gubtay Jasiiradda Nauru ee Dalka Australia (Dhagayso)
May 02, 2016 – Wararka ka imaanaya Jaziiradda Nauru ee ku taalla gudaha Badweynta Pacific-ga ayaa sheegaya in Gabar Soomaaliyeed ay is gubtay jasiiradaasi. Gabadhan oo hadda isbitaalka ku jirta ayaa ka mid ahayd dad magan-galiyo doon ah oo dawladda Australia ay ku hayso jasiiraddaasi, kadib markii ay doonyo sharci darro ah ku galeen dalka Australia. …
Dad ka Badbaaday Doontii Qalibantay oo Sheegay Sida ay Wax u Dhaceen (VIDEO)
April 26, 2016 – Dadkii ka bad baaday doontii dhawaan ku qalibantay badda u dhaxaysa dalalka Masar iyo Talyaaniga ayaa weli ku sugan dalka Gariiga iyadoo dadkani la siiyay fasax ay wadankaasi ku joogaan. Hadaba wariye Soomaali ah oo u shaqeeya Warbaanita Taleefishinka Channel 4 oo xaruntiisa ku taalo magaalada London ee dalka Ingariiska ayaa wuxuu …
Dhalinyaradii Ka Badbaaday Doonta oo Lagu soo Waraystay Dalka Gariiga (VIDEO)
April 21, 2016 – Faahfaahino dheeriya ayaa kasoo baxaya tirada dadkii ku dhintay doontii ku dagtay badda u dhaxaysa dalalka masar iyo giriiga ee Mediterranean Sea dadkaas oo intooda badan ay ahaayeen dhalinyaro Soomaali ah. Hadaba Taleefishinka Al Jazeera ee laga leeyahay dalka Qadar ayaa wuxuu soo waraystay dhalinyaradii soomaalida ahayd ee kabad baaday badda …